Slimbook Kymera: Sei Uchifanira Kutenga Iyo AMD Yakavakirwa PC? | Linux Vakapindwa muropa
Slimbook Kymera: Sei Uchifanira Kutenga Iyo AMD Yakavakirwa PC?
Slimbook ine maviri ayo mamodheru, Ventus y Aqua, kubva kuKymera akateedzana maunogona kusarudza amd chips panzvimbo yeIntel. Izvi zvinokosheswa, sezvo femu yeSpanish inopa mukana uyu kune vese vateveri ve AMD avo vanoda yemahara Windows komputa kana ine pre-yakaiswa GNU / Linux distro. Uye zvakare, kubva ikozvino zvichienda vane mamiranidziro akati wandei neCPUs zvinoenderana neZen 2 (3000 Series) microarchitecture.
AMD microprocessors yakachipa, izvo zvinoita kuti zvikwanise kuchengetedza mari yakanaka kana uchitenga komputa, uye mashandiro emachipisi matsva aya haasi kure neayo eIntel, uye kunyangwe mune mimwe miedzo chaiyo vanovapfuura. Asi ndinofanira kukuudza kuti iriko zvikonzero zvinopfuura zvehupfumi kusarudza iyi mhando machipisi. Nekudaro, ivo parizvino vanomiririra 1% yeiyo Valencian femu yekutengesa ...
Nei uchifanira kusarudza AMD?
Muchikamu madhiraivha emifananidzo, AMD yaita basa rakanaka uye parizvino pari nemusiyano mushoma pakati pevatengesi vayo uye yakavhurika yeLinux kernel. MuNVIDIA, iwo magirafu aive madzimai eLinux izvozvi ave nemusiyano mukuru pakati pemadhiraivha avo akavharwa uye akavhurika. Asi ngatiendei kuCUU uye zvikonzero nei uchifanira kufunga nezvekutenga Slimbook navo:
Pamutengo wakachipa (unenge ma60 euros) une AMD Ryzen 7 3700X, iri yepamusoro iyo Slimbook iri kukwira. Yakaenzana neIntel Core i7-9700K. Uye maficha ayo akapfuura zvakadzikama: 8 cores, 16 tambo, 3,6Ghz wachi frequency kana 4,4Ghz muTurbo modhi, chete 65W TDP uye yekutanga kugadzirwa mu7nm maitiro. Rangarira kuti iyo Intel Core i7-9700K ine TDP ye95W uye 14nm, pamusoro pekusava neHT, saka inongogadzira tambo imwe chete pachinhu chimwe nechimwe (1 yakazara).
Inochengetwa pa tembiricha yakadzika kwazvo, kunyangwe ine default kutonhora mhinduro. Izvo zvichawedzera hupenyu hwayo hunobatsira uye hazvizokanganisa mashandiro ayo panguva yekushandisa.
Iyo yakavhurwa processor, kana iwe uchifarira kudarika.
Yakanaka kwazvo processor maererano nemitambo nekutamba. Nezvibereko yakanakira kushanda ne2K uye 4K.
Iyo ine yakanaka seti yemirairo yekuvandudza mashandiro mune multimedia uye mamwe mabasa, seaya matatu matsva ekuwedzera: WBNOINVD, CLWB, RDPID, uye zvakare MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4.A, x86-64, AMD- V, AES, AVX, AVX2, FMA3 uye SHA.
24 nzira dzePCI Express 4.0. Kune iyo 16 iyo iyo Intel 9700K inayo.
zvimwe Seguridad iyo Specter kushomeka kuri kudzikiswa zvachose uye kusingakanganisike kune vamwe vanokanganisa Intel.
Great bandwidth kunzvenga mabhodhoro nekutenda kune nyowani Infinity Fabric 2 bhazi (25GT / s), neIntel's 8GT / s.
Kuchengetedzwa kwakanyanya Kutenda kune AMD SEV uye AMD SME matekinoroji, chimwe chinhu chinofanirwa kuve nehanya newe, kunyanya kana iwe uine bhizinesi.
Nenzira, kana uchida unganidza iwo mapakeji esoftware, unogona kushandisa sarudzo -march = znver2 uye -mtune = znver2 yeiyo gcc compiler kukwidziridza iyo bhanari kune ino microarchitecture ... Ichacherechedzwa kana uchivaita.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Slimbook Kymera: Sei Uchifanira Kutenga Iyo AMD Yakavakirwa PC?
Nei ichigere kuonekwa gungano remamwe malaptop anoshanda ne AMD tekinoroji mune ese CPU neGPU? All tevera Intel + Nvidia fomula mune iwo munda.
Wataura chokwadi, ndinodawo kuona zvimwe zvishandiso zvine AMD, uye zvakare malaptop ane aya ma processor. Asi Intel ndiye mambo wemalaptop ...
Kwaziso nekutenda nekuverenga
Nyowani vhezheni yeOracle Linux 7.7 yakaburitswa neRHEL 7.7 maficha uye nezvimwe